सुन्दै ड’रलाग्दो घ’टना झापामा घ’ट्यो, घ’टनास्थल पुग्दा सबैको होस उड्यो ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
सुन्दै ड’रलाग्दो घ’टना झापामा घ’ट्यो, घ’टनास्थल पुग्दा सबैको होस उड्यो ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
April 13, 2021 April 13, 2021 AdminLeaveaComment on सुन्दै ड’रलाग्दो घ’टना झापामा घ’ट्यो, घ’टनास्थल पुग्दा सबैको होस उड्यो ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
झापा बिर्तामोडको गाउँले होटलका संचालक तिलक निरौला मृत भेटिएको तीन दिन नबित्दै बिर्तामोडमै फेरि अर्का एक व्यक्ति मृ’त फेला परेका छन ।बेवारिसे अबस्थामा अर्जुनधारा नगरपालिका-५ मातामन्दिरको छेउमा बस्ने गौतम परियारको ला’श बिर्तामोडको सुगम पेट्रोल पम्प छेउको झाडीमा आज विहान फेला परेको थियो ।
गौतम परियारले राँगा काटेर मासु बिक्री गर्दै आएका थिए । अन्तै ह.त्या गरेर लाश सुगम पेट्रोल पम्प अगाडी फ्यालेको हुन सक्ने आशं’का गरिएको छ ।ला’शबाट ग’न्ध आइरहेको प्रत्यक्षदर्शीहरुले बताएका छन । ला’श फेला परेको खबर विहान ८.३० बजे आएको र घ’टनाका बारेमा अ.नुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक राकेश थापाले बताए ।
केहि दिन अगाडी गाउँले होटेलका मालिक निरौलाको पनि यस्तै बेवारिसे अवस्थामा ला’स फेला परेको थियो । आज गौतम परियारको स’ब फेला पारेको ठाउँको रिपोर्टिङ गरिएको छ । घ’टनास्थल पुग्दा नसोचेको दृश्य देखिएपछी सबै ड’राएका थिए । मृ’तकका सालाहरु मिडियामा आएर सुरुदेखिको नालीबेली बताउदा सबै चकित बने ।
थप भिडियो यहाँबाट हेर्नुहोलाः
दिपक र सरुले रुदैं गरे छुट्टिने निर्णय, तर सरुले भनिन् म छाड्न सक्दिन ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)